Intdị Infographic Interactive | Martech Zone
Indị Infographic Interactive
Tọzdee, Disemba 10, 2013 Tuesday, January 21, 2014 Savannah Marie
N'ime afọ ole na ole gara aga, infographics anọwo ebe niile ma nwee ezi ihe kpatara ya. Ndekọ ọnụ ọgụgụ na-adịkarị mkpa iji tinye ntụkwasị obi, na infographics na-eme ka ọ dị mfe ịkwatu data nke nwere ike ịbụ na ọ ga-abụrịrị ihe na-agwụ ike maka onye na-agụ ya. Site na iji infographics, data na-aghọ agụmakwụkwọ na ọbụnadị ihe ịgụ.
Ka 2013 na-achọ ịbịa na njedebe, infographics na-agbanwe ọzọ etu ndị mmadụ si eme ihe ọmụma. Ugbu a, infographics abughi naanị nke agba dị mma, mkpụrụ akwụkwọ na-adọta anya na atụmatụ mara mma. Fọdụ, n'ụzọ ziri ezi a na-akpọ ihe ọmụma mmekọrịta, na-agụnye mmegharị, njikọ na ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ịnakwere nkọwa nke infographic n'onwe ya. Ihe omuma ihe omuma ndia di elu na eme ka ndi mmadu banye uzo nke ichota ihe di nkpa. Nọgide na-agụ iji mụta ihe ole na ole iji mee ka ha bụrụ akụkụ nke usoro ịre ahịa ọdịnaya gị.
Ha dị mfe imepụta
Ebe ọ bụ na ihe ọmụma gbasara mmekọrịta na-atọ ụtọ, ndị mmadụ nwere ike iche na ihe ndị a haziri ahazi siri ike. Ọ dabara nke ọma, teknụzụ dị ka mmeghachi omume na-enyere aka mee ka mmekọrịta ihe ọmụma dị mfe ịmepụta, na ụfọdụ mmemme na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-anwa ịmepụta otu na-enweghị ndabere na nzuzo kọmputa.
Ha nwere ike inyere aka maka akara ma ọ bụ ozi gị
Ikekwe ị nwere ike icheta ihe atụ ole na ole nke vidiyo vidio Youtube ma ọ bụ memes nke a na-anụtụbeghị otu ụbọchị wee bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu okwu na mberede site na ndị na-akwado ndị ọbịa niile na ndị mgbasa ozi. Ọtụtụ mgbe, ike maka ihe ndị dị otu a metụtara etu esi ewepụta ọdịnaya ahụ.
Otu uru nke infographics mmekọrịta bụ na ha na-enye gị ohere iji okwu abụọ na ihe onyonyo na-ebugharị gaa n'ụlọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ were ya, ozi gị ma ọ bụ aha gị pụrụ ịdị n'ọnụ mmadụ niile naanị ụbọchị ole na ole. N'otu oge, ndị na-eme ihe ike na Syria jiri ihe ọmụma mmekọrịta na-egosipụta mmekọrịta na ụdị nke nguzogide na-adịghị eme ihe ike, nke nwere agba mara mma, nhazi mara mma na njikọ aka na-akọwa mbọ nke ihe kpatara ya n'ụzọ zuru ezu.
Ha Enyemaka na Njide Ozi
Ezubere ọtụtụ ihe ọmụma mmekọrịta iji mee ka ndị ọrụ akụkụ gafere, kwadebere ya na mpaghara nke na-agbasawanye mgbe ejiri ntụpọ pointer metụ ya. E wezụga inye aka ịdọrọ uche, atụmatụ ndị a na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịnọdụ ala ma mụta ihe, karịa ịpị ebe ọzọ. Mkparịta ụka nke mmekọrịta na-enye ohere ka echiche na-achịkwa ahụmịhe ha na ọnụego ha na-amụta. Akụkụ CJ Pony mepụtara ihe ọmụma mmekọrịta ejiri aka raara nye onye ọhụụ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, Carroll Shelby, na ihe mmeri ya, bụ Shelby Cobra. Ihe omuma ihe omuma a na-enye onye nlere ohere “kporo” Shelby Cobra gburugburu uwa.
Mmekọrịta ahụ nwekwara ike inye aka ma ọ bụrụ na ị na-anwa iwepụta ọdịiche dị n'etiti oke. Ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere ike ịmegharị òké ha n'akụkụ akụkụ nke ihe ngosi ma lelee ya ka ọ gbasaa iji gosipụta otu ọnụọgụ, ọ nwere ike ịme ka data ahụ nwee ike ịrapara na ebe nchekwa ahụ, kama ichefu ya ngwa ngwa.
Ha nwere ike inyere gị aka n'ịwa ihe na-eduga
You nwetụla mgbe ị na-eche na iji mmekọrịta infographic dị ka a ahịa ngwá ọrụ? Nke ahụ nwere ike ịbụ ụzọ nke ọdịnihu, ọkachasị maka ndị na-ere ihe nwere ike ibuga ndị zụtara ya ozigbo, dị ka akwụkwọ ntanetị. Ma ị na-anwa ime ka ndị mmadụ nwee mmasị na nchịkọta nke ngwa ngwa iji nweta ọrụ zuru oke ma ọ bụ chọọ ịkwalite ọnụọgụgụ nke ndị debanyere aha gị na ọdịnaya nke blọọgụ gị, ozi mmekọrịta nwere ike ime ka ndị mmadụ mara ihe ha ga-atụ anya ma ọ bụrụ na ha azụta ihe .
Naanị ka infographic ahụ ulateomie ụda na ụdị ọdịnaya dị na ihe ndị ị na-ere, ma hụ na ịtinye njikọ nke na-akpọrọ ndị mmadụ ozugbo na ibe ha nwere ike ịzụta ihe.
Nwere ike ịgbanwe usoro a ntakịrị oge site na ịtinye mmekorita mmekọrịta nke na-eme ka mmadụ banye na akwụkwọ akụkọ gị site na iji otu ịpị. Gbalịa nke a mgbe ị ka gosiputara ozi ederede juputara na eziokwu ndị na-adọrọ mmasị, ma ịchọrọ ijide n'aka na ndị na-ekiri ha mara otu esi achọta ụdị ọdịnaya ahụ.
Ha Pụrụ Shigbanwe Atụmatụ
Otu ụlọ ọrụ na-enye mkpuchi ahụike maka ndị nọ na Philippines tụkwasịrị obi na ntanetị mmekọrịta iji kpachara anya ka ọ bụrụ oke ọnụ ahịa na-arịa ọrịa dị ka onye na-enweghị nchekwa. Ebumnuche bụ ịrịọ ndị nwere ike na-atụ anya na ha ga-adị mma ma na-ekpebi ego mkpuchi mkpuchi ahụike dị oke oke. Site n'iji nlezianya na-atụle ụgwọ ndị metụtara ọrịa na nsogbu ahụike, onye okike nwere olile anya ịgbanwe echiche nke mkpuchi ahụike bụ ihe na-enweghị isi.
Could nwere ike ịme atụmatụ ime ihe yiri nke ahụ iji rute ndị ahịa na-eso obere nghọtahie ma ọ bụ ọbụna iji gosipụta ụfọdụ abamuru nke ngwaahịa gị nke ndị na-ege gị ntị na-agaghị amata na mbụ.
Ihe atụ ndị a dị n'elu bụ naanị ole na ole ihe mere o ji bụrụ ihe amamihe iji eserese mmekọrịta na usoro ịre ahịa ị na-abịa. Fọdụ ndị na-ere ahịa ejirilarịrị ha nweta ezigbo nsonaazụ, ọ ga-abụrịrị na ama ama ha na-arị elu na ọnwa ndị na-abịanụ.
Tags: Ihe omuma ihe omumamarketingInfographics Ahịaọnọdụ
Ike nke Ngwuputa Data na Mkpebi Nkwado
Dee 11, 2013 na 12: 08 AM
“Foto dị otu puku okwu!”
Dec 12, 2013 na 1:43 PM
Daalụ maka ịkekọrịta isiokwu ahụ! Ihe omuma ihe omuma bu uzo kachasi nma ime ka ndi na-agu akwukwo